Chiziviso chekuti Hebei Changshan's bovine source heparin zvigadzirwa akawana Halal chitupa |
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd. (apa zvichizonzi "Kambani") bovine sosi heparin sodium zvigadzirwa uye heparin sodium jekiseni rakapfuura Shandong Halal Certification Service Co, Ltd. (SHC) pakuongorora nzvimbo maererano naMUI. HAS23000 uye MS1500: 2009, uye isu takagamuchira HALAL satifiketi yakapihwa neiyo agency nguva pfupi yapfuura. Mamiriro ezvinhu akakodzera anoziviswa anotevera:
1. Ruzivo rwekutanga rweti drug drug certification
Zvigadzirwa zvinosimbiswa: Heparin Sodium API, Heparin Sodium Injection
Certification standard: MUI HAS23000 uye MS1500: 2009
Munyori: Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd.
HALAL satifiketi kunyoresa nhamba: 03204928
2. Dzimwe mamiriro emishonga: Bovine heparin sodium ndiyo sodium munyu weaminodextran sulfate inotorwa kubva bovine mudumbu mucosa kana bovine lung, inova mucopolysaccharides. Iyo ine mhedzisiro yakafanana neinhasi inoshandiswa zvakanyanya porcine heparin sodium mune yekurapa maitiro. Bovine heparin sodium jekiseni rinonyanya kushandiswa:
(1) yekudzivirira uye kurapwa kweiyo thrombosis kana embolizing chirwere (senge myocardial infarction, thrombophlebitis, pulmonary embolism, nezvimwewo)
(2) yakaparadzirwa intravascular coagulation (DIC) inokonzerwa nezvikonzero zvakasiyana siyana)
. HALAL certification chitupa chekuferefeterwa kuti VaMuslim vadye uye vashandise zvigadzirwa. Parizvino, nyika dzakasiyana siyana dzinobvumirana neMII HAS23000 uye MS1500: 2009 halal certification standard. Chitupa ichi chinogona kucherechedzwa nenyika zhinji dzeIslam.
3. Kubata kambani uye njodzi yenjodzi: Iyo kambani yanga ichigadzira bovine source heparin zvigadzirwa kubvira 2016. Panguva ino zvigadzirwa zve bovine source heparin zvakawana HALAL certification, zvichiratidza kuti inogona kupinda mumusika weMuslim wekuzivikanwa pasi rese. Iyo kambani ichatevera kunyoreswa kwezvinodhaka kana kusefa maitiro e bovine source heparin akateedzana zvigadzirwa munyika dzeMuslim. Parizvino, zvigadzirwa zvakatevedzana hazvisati zvave kutengeswa.